I-AutoSEO Ne-FullSEO, Yikuphi Inkonzo Ye-Semalt SEO Ehle Kakhulu?
Ngalesi sikhathi, cishe wonke umuntu uzwile nge-SEO. Iningi lenu liyazi nencazelo yalo nokuthi lisebenza kanjani. Ngaphandle kwekhanda lakho, ngeke ucabange ukuchaza ukuthi kuyinto enhle kangakanani ekushayeleni kwethrafikhi nokwenza iwebhusayithi yakho yabelwe. Noma kunjalo, sinayo i-athikili ephelele kuwe uma ungajwayelene nama-SEO. Ngomusa chofoza lapha bese ufunda ngokushesha futhi uthokozise kulokhu okushiwo ama-SEO nokuthi angasiza kanjani ibhizinisi lakho ukuba likhule.
Kepha ezikhathini eziningi ngokushesha ngibuza ukuthi hlobo luni lwe-SEO oluthandayo i-AutoSEO noma i-FullSEO engikuthola ngayo lokhu kubheka. Leyo, ingane, inika uma ubabuza ukubala abangakuqondi. Yebo, asizona izingane, futhi siyaqiniseka uma unamathela, uzofunda okuningi nge-SEO. Ekugcineni, uzobe wakhe umqondo wakho ukuthi uluphi uhlobo lwe-SEO olukhethayo.
Njengoba wazi, ama-SEO angenye yezindlela ezingabizi kakhulu zokwenza iwebhusayithi yakho ibonwe. Futhi ngoba zigxile kakhulu, izithameli zakho zingazizwa zixhumeka ngokushesha lapho zivakashela isayithi lakho.
Ngakho umbuzo wesigidi sedola uhlala uluhlobo luni lwe-SEO olungcono kakhulu i-FullSEO noma i-AutoSEO?
Ungathanda i-FullSEO noma i-AutoSEO?
Kwabanikazi abaningi bewebhusayithi nabasebenzisi be-inthanethi, abanaso isikhombisi sokuthi lokhu kusho ukuthini. Futhi akuyona into abantu abaningi abahluphayo ukuyazi. Abanikazi abaningi bewebhusayithi bakholelwa ku-SEO nje. Abafuni ukukhungatheka ngayo yonke imininingwane yokujula. Kodwa-ke, lolu lwazi luyadingeka, ikakhulukazi uma abantu abanjengawe bezama ukukuqonda.
Ukuqonda i-SEO kunenzuzo emangalisayo. Ngale ndlela, uthola isabelozimali ngendlela efanele ngenkathi wenza amathuba akho empumelelo.
Ngezinkulungwane zesoftware ye-SEO namapulatifomu anjengeSemalt, umhlaba wokuthengisa wedijithali uye waba yi-maze. Abanikazi bewebhusayithi manje sebebanjwa phakathi kokukhetha noma yiziphi izinsiza ezihamba phambili. Amakhasimende e-SEO adwengulwa phakathi kokuqashwa kwe-SEO ejensi noma asebenzise isoftware / amapulatifomu e-SEO atholakalayo. Futhi yize babelana ngokufana okuthile, bahlukile.
Ama-FullSEO afaka umuntu noma iqembu lochwepheshe be-SEO njengeqembu lethu lapha eSemalt. Lezi zingcweti ziqagela futhi zihlele amasu ahlukahlukene okusekhasini nakwikhasi le-SEO ongalisebenzisa kuwebhusayithi yakho.
Ngenkathi i-AutoSEOs ifaka ukusetshenziswa kwamapulatifomu esoftware ukusebenzisa amasu we-SEO kusayithi. Kuyadabukisa ukuthi abasebenzisi abaningi bewebhusayithi abakhululekile kakhulu ngombono we-auto SEO.
Ukukusiza ekuboneni ukuthi yikuphi okungcono, sizobheka womabili ama-SEO futhi sihlole ama-Pros and Cons awo.
I-FullSEO isabandakanya zonke izinsiza nezinzuzo zokusebenzisa i-SEO. Uthola ukukhiqiza i-organic traffic futhi ubuke iwebhusayithi yakho ibalwa ngokwemvelo. Akungabazeki ukuthi yilokhu noma yini okufunwa ngumnikazi wewebhu. Kepha kungenzeka kanjani lokho? Abanikazi abaningi bewebhusayithi babukela phansi inani le-SEO. Abaningi bacabanga ukuthi uma sebefake amagama ambalwa abalulekile, iwebhusayithi yabo iba nge-SEO Optimised. Kodwa akunjalo. Kungenxa yalesi sizathu abasebenzisi abaningi be-intanethi bengabaza ukuthi i-SEO ephelele igcwele kangakanani.
Ukushiya i-FullSEO yakho kochwepheshe beSemalt kungaba esinye sezinqumo ezinhle kakhulu ozozenzela iwebhusayithi yakho. Njengamachwepheshe, sichitha izimpilo zethu senza lokhu. Sikwenza ngisho nasekulaleni kwethu, ngakho-ke akekho umuntu ongcono ekusebenziseni ama-FullSEO wakho. Futhi sikunikeza isikhathi esithe xaxa sokuthuthukisa leyo mibono emisha emisha. Ama-FullSEOs ayaxaka futhi adla isikhathi, kepha bekungeke kudingeke ukhathazeke ngalokho. Cabanga ngakho njengengxenye yezabasebenzi. Ayikho inkampani, ibhizinisi noma umuntu oyisiqhingi. Ngokudlulisela imisebenzi enjalo eqenjini lethu le-SEO, uzinika isikhathi esanele. Isikhathi ongasichitha uphumula futhi ukhula kunokuba uhlupheke ngokulala. Futhi cabanga ngokulahlekelwa uma ngemuva kwayo yonke imizamo yakho ungajabuli ngomphumela we-FullSEO yakho.
Kodwa-ke, Nazi izinzuzo ezithile ezibalulekile zokusebenzisa i-FullSEO njengazo zombili i-SEO ekhasini nekhasi ezingekho ekhasini lewebhusayithi yakho.
Izinzuzo zokusebenzisa i-FullSEO
Unokulawula ngokuphelele isu lakho le-SEO. Nge-FullSEO, uyale ukuthi kuyaphi lapho. Ungadlulisa imibono yakho, imiqondo nobuntu kuwebhusayithi yakho ngenkathi usebenzisa i-SEO yakho. Isu lakho ngelakho ngokuphelele, okusho ukuthi lihlukile.
Ungaqinisekisa ukuthi umsebenzi we-SEO uphathwe ngokwecebo. Ukubuka uhlelo lwakho lithangiwe akuyona indlela enhle yokuqalisa iwebhusayithi. Nge-FullSEO, uthola ukuqapha isiza sakho bese ulungisa amaphutha ekusebenzeni kohlelo lwakho lwe-SEO. Ngale ndlela, ungajabuli ngomphumela.
Ngama-FullSEOs, uyakwazi ukuthuthukisa ikhasi lakho elikude. Ukuba nekhasi elingelakho kubalulekile ekwenzeni i-traffic enkulu kusiza sakho. Amakhasi Off kuwebhusayithi yakho engaphandle kwewebhusayithi yakho. Uma ubhala iposi yezivakashi kwenye i-blog noma ushiya amazwana, lokho kubhekwa njengokukhuthaza okungekho ekhasini. Ama-FUllSEOs, akuvumela ukuba ukhethe izixhumanisi ozisebenzisayo kulezi zinqenqema. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ukuthi abasebenzisi be-inthanethi bahlobise ukuphawula kwakho newebhusayithi yakho. Ukuthola amazwana achaza nge-skincare, i-FullSEO yenza kube lula kuwe ukuthi uthathe izixhumanisi kuwebhusayithi yakho ukhuluma nge-skincare. Ngale ndlela, uguqula abafundi ababeke amazwana babe traffic futhi mhlawumbe babe amakhasimende.
Ungakhetha ukuthi isayithi lakho lixhumeke kuphi. I-FullSEO ikuvumela ukuthi ukhethe ikhwalithi yezindawo zokuxhuma nekhwalithi yokuqukethwe ezungeze i-backlinks yakho. Ngale ndlela, ulawula ukuthi ubani obona okukhombisa indawo yakho ngendlela enhle kakhulu.
Akukho lutho oluphelele, futhi kunezindlela ezithile eziphansi zokusebenzisa i-FullSEO
Isikhathi esisetshenziswa: Ama-FullSEO adinga isikhathi esiningi nomzamo kusuka kubabhali bawo. Ikakhulu uma kwenziwa ngumuntu onamava enkundleni. Ukuqasha izinsiza ze-SEO ejensi kungaba yindlela enhle yokugwema lokhu.
Kudinga iqembu elizinikele: uzodinga iqembu elizinikele kakhulu ukukhipha i-FullSEO emangalisayo.
Kumawebhusayithi amakhulu, ukuqaliswa kwe-FullSEO kungathatha isikhathi eside.
Ikhulu lama-21 liza nentuthuko eminingi kwezobuchwepheshe. Imizamo yabantu incishiswa kakhulu ngokuthuthuka kokuphuma futhi konke kubonga kubuchwepheshe. Futhi-ke, abantu abaqaqekile abasiza ukuyidala.
I-AutoSEO ngesinye isici sezimpilo zethu lapho ubuchwepheshe bunikeze usizo olukhulu. I-SEO ezenzakalelayo ukusetshenziswa kwe-software ezisebenza ngokuphelele ye-SEO noma ezisebenza ngokuzenzakalelayo kanye namapulatifomu ukusebenzisa amasu e-SEO. Lobu buchwepheshe bunqande isidingo somzamo womuntu.
Nazi ezinye izinzuzo ze-AutoSEO
Kushibhile kune-FullSEO. Ingabizi kakhulu kune-FullSEO. Ngenxa yokuthi kudingeka umzamo omncane noma cha womuntu, alikho iqembu le-SEO. Lokhu kunciphisa izindleko zesondlo okwenza ukuthi abakhiqizi be-AutoSEO banciphise izindleko zabo.
Isebenza kalula imisebenzi eyisicefe: ngaphandle kwekhono lokukhathala, ukuhlupheka ukujula kobuchopho noma ukukhubazeka, imishini ingaligcina isivinini sokusebenza esisheshayo futhi esishintshashintshayo. Lokhu kwenza kube lula ukuphatha imisebenzi efana nokuhlolwa kwezimali, ukubheka izixhumanisi eziphukile, ukungazinzi kwamagama, amathegi nolunye ulwazi olubalulekile kumawebhusayithi kungakhathalekile usayizi wawo.
Kulula ukuthola idatha enembile futhi esesikhathini kuhlu lwakho lwamagama asemqoka.
Lobu buchwepheshe bukunika amandla okuhlaziya imiqobelo yakho yokuncintisana, usizi lwamagama angukhiye, omaki neminye imininingwane enenzuzo. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa lolu lwazi, uqonde izimfihlo zabo futhi uthuthukise isayithi lakho.
I-AutoSEO ikuvumela ukuthi uhlelele imisebenzi ye-SEO esisindisa isikhathi kakhulu.
Asikho isidingo sokuqasha iqembu elikhulu le-SEO. Ubuchwepheshe bingenza isoftware yenze umsebenzi wabantu abayishumi, futhi lokhu kulondoloza izindleko kumthengi nomthengisi. Ngokuqeda isidingo sokuqasha iqembu elikhulu, izinkampani ezincane nokuqalisa kusethubeni elingcono lokusinda emakethe enzima.
Ukususwa komuntu kusadingeka. Kunezizathu eziningana zokuthi kungani abantu besaphatha imisebenzi ebucayi futhi ebaluleke kakhulu. Akunandaba ukuthi ubuchwepheshe busezingeni eliphakeme kangakanani, sisekhona ithuba lokuthi ungasebenzi kahle.
Lapho engasetshenziswa kahle, isoftware ye-SEO idala ama-backlinks amabi. Lokhu kungenza ukuthi iwebhusayithi yakho ihlawuliswe.
Iningi le-software ye-SEO ligxile kunani lamagama angukhiye we-SEO, ama-backlinks njll. Abanaki kangako ikhwalithi. Lokhu kungaba yinkinga ngokuhamba kwesikhathi.
Izixhumanisi eziningi ezenziwe nge-software ye-SEO noma amapulatifomu akakhiqizi i-traffic esizeni sakho.
Yini okufanele usebenzise?
Ngokunikeza zombili izinsizakalo, uSemalt ukukunikeza amathuba amahle okukhetha inketho efaneleke kakhulu. Umuntu ngamunye newebhusayithi yakhekile, futhi ufanele ukwelashwa okukhethekile. Noma iyiphi inketho ongayicabanga ukuthi ihamba phambili, sazise, futhi sizokhipha isayithi elihle kakhulu le-SEO owake walibona. Ngeqembu lethu elimangalisayo nabahlinzeki bethu bezokunakekelwa kwamakhasimende abahlala betholakala, ungabuza noma yimiphi imibuzo ongahle ube nayo futhi bakubekezelele. Sizizwa siqiniseka ngokwazi ukuthi manje usuqonde ukuthi i-FullSEO ne-AutoSEO kusho ukuthini. Ngalo lwazi, manje usungakhetha phakathi kweSemalt FullSEO nezinsizakalo ze-AutoSEO nalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uqinisekise ukuthi ukhetha insiza efanelekayo kakhulu ye-SEO kuwebhusayithi yakho nakwibhizinisi. Manje usungakhetha noma yiluphi ukhetho ocabanga ukuthi luhamba phambili.